5min ukuhamba ngezinyawo ukuya e-olon beach&town, pool, parking, gated - I-Airbnb
5min ukuhamba ngezinyawo ukuya e-olon beach&town, pool, parking, gated
Olon, Santa Elena, i-Ecuador
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Alyson
Vula indlu enomoya/indlu yasebhishi etholakala ngaphakathi kweCabanas de Olon, umphakathi ozimele ongenamasango angu-3 ukusuka ogwini lwase-Olon. Ikhishi eligcwele, i-a/c ekamelweni ngalinye, i-wifi, i-Smart TV ene-Netflix ne-YouTube, i-pool yomphakathi kanye nokuthula okuningi. Indawo yokuhlala enosofa, isikhungo semidiya, nosilingi we-bamboo. I-Olon beach itholakala imizuzu emi-5 ukusuka ebhishi laseMontanita
Indlu/ikotishi elivulekile linamakamelo ezivakashi amabili anomoya, ngalinye linesiphephetha-moya esisha esihlukanisayo ukuze uhlale ukhululekile ngemva kosuku lwakho lokuhlola ulwandle. Ikamelo ngalinye liqokwe njengombhede olingana nendlovukazi, amatafula aseceleni kombhede, nezibani zetafula. I-hallway inekhabethe elingeziwe lesitoreji esengeziwe. Indawo yokuhlala inophahla olufakwe ngoqalo oluphakeme, ukukhanya kwesibhakabhaka, usofa wesigaba, isikhungo semidiya esine-tv nesidlali se-dvd, kanye nemibono emihle engadini kanye nethala elingaphambili. Ikhishi elivuliwe ligcwele izici zekhishi nawo wonke amathuluzi okulungiselela idili lakho, okuhlanganisa isiqhingi sangaphambi kokulungiselela nesokudlela, usinki, isiqandisi, isitofu, ne-microwave.
I-TV engu- 24" ene-I-Netflix
4.52 out of 5 stars from 132 reviews
4.52 · 132 okushiwo abanye
Uma usuka nje e-Ruta del Sol, phuma ekuseni uye ebhikawozi ukuze uthole amakhekhe amasha, noma mane uwele umgwaqo uyothenga igrosa. Qaphela - leli kotishi ALIKHO enkabeni ye-Montanita, kodwa imizuzu embalwa nje (3) ngekhebhu uma uthanda. Lokhu kuyenza ibe indawo yayo ekahle yokuba nobumfihlo kanye nolwandle lwakho ongakujabulela lapho ufuna ukuzipholela, kanye nedolobhana elincane lezitolo nezindawo zokudlela eziseduze - eduze - kanye nebhonasi enhle yokukwazi ukuzwa izinhlobonhlobo zokudla, ama-boutiques, amabha kanye nezinsiza i-Montanita inazo. Imifino emisha kanye nezimpahla zemakethe ziyatholakala emakethe yendawo ngaphesheya komgwaqo naphansi kwebhlokhi. Futhi futhi ingathengwa ngqo kuma-back o abalimi abacoshayo njengoba beginqa edolobheni ekuseni. Maphakathi nasekuseni - thola ukubanjwa kwansuku zonke ogwini - noma ubambe okubonakala kungcono kakhulu njengoba umdobi egibela ibhayisikili lakhe - ulungele ukugoba ngendlela othanda ngayo. Ukusefa, ukuphumula, ukudla, ukugibela izintaba, ukuthenga, ukubhucunga, ukubhukuda, ukugibela amahhashi, ukubuka imikhomo, izimpophoma, impilo yasebusuku, izindawo zokudlela.... konke kulapha futhi kulinde ukutholwa.
U-Amelia uzohlangana nawe noma ashiye okhiye ebhokisini lokukhiya ukuze ufike. Uhlala eduze futhi uyatholakala ukuze akusize nganoma yiluphi usizo oludingayo ngosizo lomuntu siqu. Kukhona nensiza etholakalayo yokuhlanza indlu uma uyicelile njengenkonzo eyengeziwe.
U-Amelia uzohlangana nawe noma ashiye okhiye ebhokisini lokukhiya ukuze ufike. Uhlala eduze futhi uyatholakala ukuze akusize nganoma yiluphi usizo oludingayo ngosizo lomuntu siqu.…